Sida Loogu daro Cinwaanada Emailka LinkedIn | Martech Zone
Sida Loogu daro Cinwaanada Emailka LinkedIn
Jimco, Nofeembar 30, 2012 Axad, Janaayo 15, 2017 Douglas Karr
LinkedIn waxay bedeshay qaybta Iskuxirka Add iyo, feker ahaanteyda, waxay sameysay dhaqaaq carrab la 'oo aasida habka ku darista xiriirka cinwaanka emaylka. Ma hubo whey ay sidan ku sameeyeen laakiin hadda waa 4 talaabo oo tallaabo ah halkii ay ka qaadi lahayd labada tallaabo ee ay qaadi jirtay. Kani waa bogga ugu badan ee aan ku booqdo LinkedIn markaan ka soo noqdo khudbadaha ama shirarka. Waxaan maraa kaararka ganacsiga ee dadkaas aan soo ururiyay oo aan ku xirnaado.
Isdhexgalka adeegsadaha cusub, si loogu daro isku xirnaanta cinwaanka emaylka, waa kuwan tallaabooyinka soo socda:
Riix Kudar Xiriirinta midigta kore kadib markaad gasho LinkedIn.
Click ah Email kasta astaanta dhinaca midig.
Under Siyaabo badan oo lagu xiro, guji Ku martiqaad email shaqsiyeed.
Ku qor cinwaannada emaylkaaga guji U dir Casuumado.
Tags: ku dar isku xirnaantaemailLinkedIn
Isbeddellada Isbeddellada Suuqgeyaashu Ma Ilduufi Karo
Liistada Hubinta Suuqgeyga ee Nidaamka Mudnaanta leh
1, 2012 at 11: 39 AM
Maxa kaliya loogu raadin iyaga magacooda oo guji xiriiri?
1, 2012 at 1: 18 PM
Midba mar? Ma dhici karto! Tani waxay ii oggolaaneysaa inaan ku daro dhammaantood hal mar.
2, 2012 at 11: 57 AM
Haa, tani waa mid ka mid ah meelahaas adiga iyo anigu waligayna waan ku khilaafi doonaa. Kuma daro dadka LinkedIn ilaa aan si dhab ah "ugu xirnaado" iyaga mooyee. Ma ahan ciyaar ballaaran in la arko inta xiriir ee aan heli karo.
Markii aan aado munaasabad WAAN soo laaban karaa oo waxaan ku dari karaa shan qof sida isku xirnaanta. Inta soo hartay waxay galaan SalesForce ama MQL ahaan ama SQL.
2, 2012 at 12: 22 PM
Haddii qof ii dhiibo kaarkooda ganacsi ama uu ila xiriiro aniga oo u maraya goobta ama iimaylka, annagu waan isku xirnahay. Anigu ku xadgudbi maayo xiriirkaas - laakiin raadinta kheyraadka runtii way ku anfacaysaa mararka qaarkood. Wax dan ah kama lihi tirada isku xirnaanta, waxaan dan ka ahay gaaritaanka shabakadeyda. Oo way shaqaysaa!